Izicelo ezi-6 ezilungileyo zokwenza amanqaku kwi-Android | I-Androidsis
UAron Rivas | 15/06/2021 01:39 | Ukusetyenziswa kwe-Android, Izixhobo ze-Android
Phakathi kweentsuku ezixakekileyo nezinoxinzelelo, kuhlala kulungile ukuba nesixhobo okanye iapps yokwenza amanqaku ngokukhawuleza nangokulula, kuba kuyinto eqhelekileyo kuthi ukuba sizilibale izinto ezithile kunye nemisebenzi ekufuneka siyenzile emini. Ayikho into enjengokubhala incwadana yokubhala phantsi wonke umsebenzi osele ugqityiwe kunye noshiyekileyo ukuba wenziwe, ukuze ube nokulungeleka ngakumbi nangokufanelekileyo kwimisebenzi yemihla ngemihla enjengomsebenzi okanye izicwangciso ezilindileyo.
Ukuba nesicelo sokwenza amanqaku kuyafuneka namhlanje, njengoko kusinceda ukuba sihambise ngcono imisebenzi, singalibali imisebenzi kwaye silungelelaniswe ngakumbi. Kwangelo xesha, zenzelwe ukuba ziqulathe ezo ngcinga zenzeka kuthi ngokungalindelekanga nangokuzenzekelayo, ukuze, ngale ndlela, singazilibali kamva. Kungenxa yoko le nto siqokelela eli xesha ezonaapps zi-6 zibalaseleyo zokuthatha amanqaku kwi-Android.
Apha ngezantsi sinxibelelanisa uthotho lweeapps ezi-6 ezilungileyo zokuchaza kunye nokwenza amanqaku kwiifowuni ze-Android. Kubalulekile ukuba uqaphele, njengoko sihlala sisenza, ukuba zonke onokuzifumana kule post yokudibanisa zisimahla. Ke ngoko, awuzukunyanzela ukuba wenze nayiphi na imali ukuze ufumane enye okanye zonke. Nangona kunjalo, enye okanye ezingaphezulu zinokuba nenkqubo yentlawulo encinci encinci, enokuvumela ukufikelela kumxholo ongaphezulu ngaphakathi kubo, kunye neprimiyamu kunye neempawu eziphambili. Nangona kunjalo, akuyomfuneko ukwenza nayiphi na intlawulo, kufanelekile ukuphinda. Ngoku ewe, masifike kuyo.
1 Amanqaku alula: Amanqaku asimahla, iAgenda, ukungaziwa
2 Amanqaku alula
3 Incwadana yokubhalela-Thatha amanqaku
4 Amanqaku eNqaku yeNqaku leMibala
5 Idayari yam -Idayari, idayari eneqhaga
6 Amanqaku ombala
Amanqaku alula: Amanqaku asimahla, iAgenda, ukungaziwa
Ukuba ufuna ukugcina usesikhathini kunye ne-super elula yokusebenzisa i-notepad kunye ne-interface enobungane, epheleleyo, ehlelwe kakhulu kwaye, ngexesha elifanayo, elula, Amanqaku alula: Amanqaku asimahla, iAgenda, ukungaphumeleli yeyona app ilungileyo, Kungenxa yoko le nto siyibeke kuqala kule post yokudibanisa, ikwayenye yezona zidumileyo, ikhutshelwe kwiVenkile yokuDlala kwaye isetyenziswe kwi-Android.
Bhala phantsi kwaye wenze amanqaku ngokulula ngesi sixhobo ukuze ungalibali into ekufuneka uyenzile kwaye ube nolawulo oluchanekileyo nolucwangcisiweyo lwemisebenzi nayo yonke into oyicwangcisele usuku nosuku. Bhala izimvo ezikhawulezayo kule app ngokusebenzisa iincwadana kwaye eyona nto intle kukuba ikuvumela ukongeza iifoto okanye iaudiyo kumanqaku, ke zinamandla kwaye ziyonwabisa kunezinye ii -apps ezisisiseko. Khetha imvelaphi yokhetho lwakho kwaye ugcine amanqaku akho kunye noluhlu lokutshekisha ngaphandle kweengxaki ezinkulu.
Uyilo olulula olunefomathi elungelelanisiweyo yesichaso esikhawulezayo
Qaphela ukuphina / ukumisa umsebenzi wokujonga okona kubaluleke kakhulu kunye nokuphambili
Unokongeza iifoto, imifanekiso, iaudiyo kunye nomculo kwiinowuthsi, ukwenza amanqaku abe mnandi kwaye abe awomntu
Izaziso kunye nokukwazi ukumisela kunye nokuzihlengahlengisa ukuze zenze izikhumbuzo ezikuthintela ekulibaleni oko kuqatshelwe kwi-app
Unxibelelwano olulula kunye noku-odolwa ngemihla ukuze ufumane amanqaku ngokukhawuleza nangaliphi na ixesha
Kukho iindidi ezininzi zokukunceda ucwangcise amanqaku akho kwaye uzibeke phakathi kwabo. Unokufaka umbala kumanqaku
Ukugcina ngokuzenzekelayo emva kokwenza inowuthi xa ubhala ngexesha lokwenyani
Unokwabelana ngamanqaku ngokulula nangokulula
Umthuthukisi: I-QR Scanner kunye ne-QR Code Generator kunye neRadiyo kunye namanqaku
Ngamanye amaxesha asifuni ukuba izicelo zigcwaliswe yimisebenzi emininzi, nangona ezi zingaphazamisi amava omsebenzisi amnandi. Ngamanye amaxesha usetyenziso olulula nolusebenziseka lula njengamanqaku alula yiyo yonke into esiyifunayo, njengoko injalo ukuya kwinqanaba kwaye inikezela ngokugcina amanqaku kunye namanqaku ngendlela ehleliweyo, ngelixa lihlala sisixhobo esilula esenza oko sikuthembisayo.
Amanqaku okuhlela kunye namanqaku ngesi sixhobo silula kakhulu, kunye noyilo lojongano, oluqhuba ukusetyenziswa kwalo. Ngale app singabhala uluhlu lokuthenga, izikhumbuzo, amanqaku, izimvo ezimfutshane, iitekisi ezinde kunye nemisebenzi esifuna ukuyenza imini yonke okanye kamva, phakathi kwezinye izinto.
Isivumela ukuba siququzelele amanqaku esiwagcina kuwo kwiincwadana, eziququzelela ukuwakhangela. Ngaxeshanye, Inombhalo wewijethi enamathelayo esinokuyibeka naphi na kwisikrini sasekhaya, ukuze ungalibali ezona zibalulekileyo. Sinokwenza iikopi zokulondoloza kwisitoreji sangaphandle, kunye nokwabelana ngamanqaku kunye namanqaku ngeSMS, i-imeyile okanye i-Twitter.
Ngakolunye uhlangothi, yenye yezona zinto zilula kakhulu ukuthatha izicelo ze-Android nakwi-Play Store. Ubunzima bayo bungaphantsi kwe-5 MB, kodwa oku akukuthinteli ekufumaneni indawo ehloniphekileyo kwivenkile kaGoogle kunye nokufumana amanqaku eenkwenkwezi ezi-4.6, esekwe ngaphezulu kokukhutshelwa kwesigidi esinye kunye nama-1 amawaka amagqabantshintshi.
Umthuthukisi: Itekhnoloji yeParaga
Incwadana yokubhalela-Thatha amanqaku
Esinye isicelo esihle sokwenza amanqaku kwi-smartphone yakho ye-Android, ngaphandle kwamathandabuzo, iNqaku leNqaku- Thatha amanqaku, usetyenziso olunobunzima olunezinto ezininzi kunye nemisebenzi eyenza ukuba imihla ngemihla ibe lula kwaye icwangciswe ngakumbi, unikwe zonke iinketho onazo. umnikelo.
Ngale app Unokwenza amanqaku ngombhalo, imifanekiso, uluhlu lokutshekisha kunye nomsindo. Unamathuba okongeza izinto ezahlukeneyo kwaye uguqule nanini na xa ufuna. Kwangelo xesha, ikuvumela ukuba urekhode amanqaku elizwi, aluncedo kakhulu, kwaye uskene okanye uncamathisele amaxwebhu eMicrosoft, iPDF kunye nezinye iifayile.
Kwelinye icala, yenza ukuba kube nakho ukugcina amanqaku kunye namanqaku kwiincwadana, ezenza ukuba yonke into icwangciswe kwaye ibe lula. Ikwavumela ukuba kwenziwe ingqokelela yamakhadi eenowuthsi ngokwamaqela amanqaku, ukuphinda uhlengahlengise amanqaku ngaphakathi kwincwadi yokubhalela, ukuhambisa okanye ukukopa amanqaku phakathi kweencwadana, ukukhangela ngaphakathi kwincwadi yokubhala okanye kwiincwadana, ukukhiya amanqaku ngokukhuselekileyo ngamaphasiwedi kunye sebenzisa iminwe yeminwe ukufikelela kuzo (kuphela ukuba iselfowuni inomfundi okhoyo).
Umthuthukisi: Inkampani yeZoho
Amanqaku eNqaku yeNqaku leMibala
Kulabo bathanda iincwadana ezilula kunye nezidala, UmbalaNote yenye yezonaapps zithatha amanqaku kwiVenkile yokudlala, kuba ujongano olucocekileyo kunye nemisebenzi ebalulekileyo esisiseko.
Iimpawu eziphambili zale sicelo zezi zilandelayo:
Unokwenza amanqaku ngokwezifiso ngemibala eyahlukeneyo
Inkqubo yombutho olula ngebhodi
Izikhumbuzo kunye nezaziso kwibhar yomgangatho: ixesha le-alamu, imini yonke, isnuza (ikhalenda yenyanga)
Umsebenzi wokukhangela ngokukhawuleza wamanqaku kunye neememo
Iipassword zeememo zezwi kunye nokhuseleko oluqinisekisiweyo kunye nemfihlo. Amanqaku abhalwe ngokufihliweyo phantsi komgangatho we-AES, ikwayiloo nto isetyenziswa ziibhanki ukukhusela idatha yabathengi.
Yenza amanqaku kuLuhlu lokuKhangela kunye neMisebenzi
Ukubakho kokuvumelanisa amanqaku kunye nenqaku phakathi kweselfowuni kunye nethebhulethi
Ikopi yogcino lwamanqaku agcinwe kwikhadi le-smartphone le-microSD
Incwadana yokubhala ehambelana neColourDict Yongeza-kwi
Yabelana ngamanqaku ngeSMS, i-imeyile, i-twitter
Amanqaku ancamathelayo njengamawijethi anokubekwa kwisikrini sasekhaya sefowuni
Idayari yam -Idayari, idayari eneqhaga
Idayari ihlala isisibonelelo esifanelekileyo sokwenza amanqaku abalulekileyo kunye nezichasiselo, ukuze ungalibali izihloko, imisebenzi, izimvo, iinjongo kwaye ucwangcise yonke into esele silindele usuku. Esi sicelo sisebenza njengenye, kodwa sinokukunika usetyenziso lwencwadana yokubhala kunye namanqaku. Yintoni egqithisile, kukhuseleke ngokugqithileyo, imfihlo yenye yeamandla ayo, njengoko iikhowudi zokungena zinokwenziwa ukuze zikwazi ukungena kwidayari.
Kwelinye icala, esi sicelo sixhasa usetyenziso lweprinta yeminwe ngokusebenzisa iselfowuni yokufunda ukuvula ukufikelela. Ikwahle kakhulu ngokwezifiso; Unokukhetha imibala yamanqaku, kunye nemvelaphi yedayari, okanye ukhethe ifayile ye- Umxholo omnyama, eyenza ukuba iapp ingakhazimli ebusuku ngemibala ekhanyayo kunye ne-incandescent. Unako ukungqamanisa oolindixesha babucala okanye bemihla ngemihla kwilifu ngeGoogle Drayivu, ukuze, ngale ndlela, ukwazi ukufikelela kuzo ngalo lonke ixesha. Ukongeza koku, kukho iithegi ezahlukeneyo onokuzisebenzisa ukubona izichaso zakho, phakathi kwezinye izinto.
Le app ithandwa kakhulu kangangokuba sele inezikhuphelo ezingaphezulu kwezigidi ezili-10 kwiVenkile yokuDlala kunye nenqanaba leenkwenkwezi le-4.8 kwivenkile. Kufanelekile ukuzama.
Umthuthukisi: Usetyenziso lweDeri kunye namaNqaku kunye noMhleli weaudio kunye neRekhodi yeLizwi
Ukugqiba esi sithuba sokudityaniswa kwezonaapps zibalaseleyo zokwenza amanqaku kunye nokwenza amanqaku, sinamanqaku eMbala, enye insiza ebalaseleyo ezalisekisa lo msebenzi. Le ikwanonxibelelwano olulula noluchanekileyo, kunye neempawu ezithembisayo ezenza umbutho wemihla ngemihla ngokusebenzisa izichasiso ezifanelekileyo.
Ezinye zeempawu zayo kubandakanya ukukhethwa kweefonti ngokwezifiso amanqaku kunye nemibala eyahlukeneyo yazo. Inobunzima malunga ne-8 MB kuphela, ke ikwalula kakhulu.
Umthuthukisi: Imbuyekezo Kenzap Pte Ltd.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Izicelo ezi-6 ezilungileyo zokuthatha amanqaku kwi-Android